Warbixino | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL Warbixino – Page 14 – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
XOG RASMI AH: Maxaa ka soo baxay wada hadal dhexmaray M/weynaha Somaliland & Ra`iisulwasaaraha dalka Itoobiya, oo ka dhacay Addis Ababa?
ADDIS ABABA(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes oo saacadihii ugu dambeeyey Wariyaashiisa kusugan magaalada Hargeysa ay ku mashquulsanaayeen in la helo xogaha ku aadan wada hadalada ka socday magaalada Addis Ababa ayaa ogaaday in Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo duhurnimadii maanta tagay halkaas uu la kulmay Ra’iisulwasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegne. Ujeedada ugu weyn ee kulamadan...
XOG: Ciidamada Isku dhafka ah ee kusugan Gaalkacyo, waa Maxay doorkooda Shaqo, Maxayse ka qabteen dilalkii qorsheysanaa ee ugu dambeeyey?
GAALKACYO(P-TIMES)- Shacabka labada dhinac ee magaalada Gaalkacyo ayaa is weydiinaya doorka shaqo ee ciidamada Isku dhafka ah ee kusugan magaaladaas, kuwaas oo ilaa hadda ku guuleystay in ay kala xakameeyaan maleeshiyo beeleedyada mararka qaarkood ay suuragal tahay in ay ku dagaalamaan Suuqa weyn ee magaalada, laakiin aan wali dabagal ku sameyn mid kamid ah Hadafyadii loo asaasay. Mid kamid ah waxgaradka...
XOG MUHIIM AH: Wararkii ugu dambeeyey ee Xaaladda Tukaraq, Kulamo aan kala joogsi laheyn oo ka socda Laaska & Garoowe iyo Dadaalada dawlada Itoobiya.
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalooyinka Laascaanood & Garoowe ayaa sheegaya in ay socdaan kulamo adag oo ay leeyihiin labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland, kuwaas oo yoolkooda ugu weyn yahay, sidii ay u dagsan lahaayeen qorshaha ay ku wajahayaan xaaladda Colaadeed ee ka dhex aloosan ciidamadooda, taas oo gaartay heerkii ugu sareeyey. Kulamadan waxaa kala...
DAAWO SAWIRRO+DEG DEG: Waa Sidee Xaaladda magaalada Tukaraq, Wariyayaal tagay & Xaaladdihii u dambeeyey
TUKARAQ(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Tukaraq ee gobalka Sool ayaa sheegaya in xiisada labada dhinac ay tahay mid wali kacsan, cabsina laga qabi karro dagaal culus oo dhexmara. Ciidamadii ugu faraha badnaa ayey labada dhinacba geeyeen deegaanada oo aad iskugu hor-fadhiyaan labada ciidan, waxaana dadka deegaanka qaarkood ay muujiyeen cabsida ay qabaan. Warbaahinta dawladda...
XOG RASMI AH: Ma dhab-baa in Ciidamada Somaliland ay ka baxeen Tukaraq, Dagaal dhacay iyo Wararkii ugu dambeeyey?
TUKARAQ(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya deegaanada ay isku hor-fadhiyaan Puntland & Somaliland ayaa sheegaya in xaaladu ay adag tahay, balse saacad kasta laga filan isku dhac ama dagaal dhexmara labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland. Ciidamadii ugu faraha badnaa ayay keenen labada kooxoodba, kuwaas oo ujeedadu tahay sidii ay ugu hardami lahaayeen gacan ku heynta magaalada Laascaanood...
FAALADA JIMCAHA: M/weyne Farmaajo muxuu ku arkay Socdaalkii ugu dheeraa ee uu kusafro dhulka, kuna tagay gobalo kala duwan?
BOOSAASO(P-TIMES)- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay todobaadkan u ahayd mid kamid ah waqtiyadii ugu mashquulka badnaa, laakiin wuu ka duwanaa mashquulka yaala Villa Soomaaliya, wuxuuna safar dheer uga bilowday 7—dii bishan magaalada Garoowe oo laga xukumo gobalada Puntland. Shacabka Puntland oo ay hogaaminayaan Madaxda maamulkaas ayaan u kala harin soo dhaweynta wafdigan...
FAALLO XASAASI AH: Madaxweyne Gaas muxuu qabtay 4-tii sanno ee lasoo dhaafay, Ma gaaray guul mise Guuldarro?
Maalinti Isniinta waxay ku beegneyd Sideedii Janaayo, waxay ahayd afar sano guuradii doorashadii Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Cali Gaas. Sideeda Janaayo waxay noqotey maalin ka duwan maalmaha kale, saddex jeer oo taariikhdu tahay 8, Janaayo waxaa Puntland ka dhacay doorasho Madaxweyne, waxaana is-bedalay afar Madaxweyne oo Puntland soo marey, taas oo ku dhacdey si nabadgelyo iyo dimoqraadiyad...
FALANQEYN XASAASI AH: Maxay uga dhigan tahay M/weyne Gaas xiisadda cusub ee kasoo korortay dhinaca Laascaanood, Guul mise Guuldarro?
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xalay baajiyey Munaasabada Xuska 4 sanno guuradii kasoo wareegtay markii la doortay, wuxuuna soo bandhigi lahaa wixii uu qabtay iyo Mashaariicda horumarineed ee uu ka fuliyey gudaha Puntland, madashana waxaa goobjoog ahaa oo lagu casumay Madaxweynaha Soomaaliya iyo marti sharaf laga kala keenay gobalada oo dhan. Warar...
FALANQEYN XASAASI AH: Maxaa laga filan karaa socdaalka M/weyne Farmaajo ee Puntland & Arrimaha la filan karro?
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safarkiisii ugu horeeyey oo uu kutago gobalada Puntland ku tagaya magaalada Garoowe, waxaana safarkiisan uu yahay mid saadalinayey bilihii ugu dambeeyey, ugu badnaana 3 jeer uu dib uga dhacay imaanshaha Puntland. Madaxweynaha Soomaaliya waxaa kuwehlin doona wasiiro katirsan Xukuumada Faderaalka, waxaana...
WARBIXIN CUSUB: Sannadka 2017-ka oo Soomaaliya ku sagootiyey Duufaano Siyaasadeed & Halis weyn oo taagan..
MUQDISHO(P-TIMES)- Sannadka sii dhamaanaya ee 2017-ka ayaa Soomaaliya ku sagootiyey duufaano siyaasadeed oo ay adag tahay in si fudud looga dhex-baxo, bacdamaa ay ku lug leeyihiin wadamo adeegsanaya Balaayiin Dollar, iskuna ximinaya daganaanshaha yar ee kahana qaaday dalkan. 4tii bilood ee ugu dambeeyey sannadkan ayaa noqday kuwa aad xamaasad u lahaa, waxaana wararka ugu waa weyn ee laga qoray Soomaaliya...
XOG CUSUB: Waa maxay Ujeedada ka dambeysa in Imaaraatka Carabta aan laga jeclaan Madaxtooyada Somalia?
MUQDISHO(P-TIMES)- Wixii ka dambeeyey markii ay dawladda Faderaalka Soomaaliya dhexda u gashay arrimaha murugsan ee kadhex taagan wadamada Khaliijka waxaa soo badanaya dhaliilaha xooga badan ee ay dawladdu u jeedinayso wadamada Sacuudiga & Imaaraatka Carabta, oo labaduba mudo dheer saaxiib la ahaa Soomaaliya. Dawladda Faderaalka ayaa bishan dhamaadka ah bilowday qorshe kasta oo ay ku caburinayso...
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar dheeraad ah oo ay heshay Puntlandtimes ayaa cadeynaya in ay dawladda Imaaraatka Carabta aad uga xumaatay hadalada iyo wararka ay isku gudbinayaan Madaxda dawladda Faderaalka, kaas oo la xariira weerarkii shalay lagu qaaday Mid kamid ah Xildhibaanada Aqalka Sare ee dawladdaas. Saraakiil ku dhaw dhaw Safaaradda Muqdisho ayaa sheegay in Diblumaasiinta Safaaraddu ay khabarkan...
ABU DHABI(P-TIMES) – Hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya qaar kamid ah ayaa kushirsanaa maalmihii lasoo dhaafay dalkan Iskutaga Imaaraatka Carabta, kuwaas oo uga hadlayey xaaladaha cakiran ee dhanka siyaasada kana aloosan magaalada Muqdisho, waxayna diiradda saarayeen waxyaabaha ku aadan talaabooyinka ay qaaday dawladda Soomaaliya. Xubnahan oo iskugu jira labada golle ee baarlamaanka Soomaaliya,...
XOG DEG DEG AH: Madaxtooyada Soomaaliya oo qaaday talaabo halis badan ka soo wajahaysa & Safiirka Imaaraatka Carabta oo lagu amray?
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa helay xog cadeynaysa in Madaxtooyada Soomaaliya ay ku amartay Madaxda Wasaaradda Arrimaha dibada ee dalka in ay si deg deg ah warqad ugu qoraan Safiirka dawladda Imaaraatka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Cuthmani, taas oo halisteeda leh. Sidda ay xogtu cadeynayso Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka welwelsan dagaalka uga soo wajahan siyaasiinta ku...
XOG RASMI AH: Yaa ka dambeeyey Weerarkii Senator Cabdi Qeybdiid lagu qaaday, Maxaase NISA ka dhawaajiyey?
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya weerarkii maanta lagu qaaday gurriga gudoomiyaha guddiga Dibu eegista Dastuurka labada golle ee dawladda faderaalka Senator Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid), kaas oo ay qaadeen ciidamo katirsan dawladda Faderaalka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa amray in si deg deg ah cadaaladda loo horkeeno ciidamadii ka dambeeyey weerarkaas, waxaa la xiray...
MUQDISHO(P-TIMES) – Shirar siyaasadeed kuwoodii ugu sareeyey ayaa kasocda magaalooyinka Nayrobi iyo Abu Dhabi, kuwaas oo dhexmaraya Siyaasiin,Xildhibaano, Raysalwasaare hore iyo Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayna uga gol leeyihiin sidii loo diyaarin lahaa mooshin ka dhan ah Madaxda dawladda Faderaalka ee Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in kulankan aad looga dooday...
UPDATE:- Amiirka Boqortooyadda Sacuudiga Oo Sii Deynaya Amiiradii Iyo Maalqabeenadii La Xiray
RIYADH(P-TIMES)-Xeer ilaaliyaha Boqortoyada Sacudi Carabiya ayaa amray in la sii daayo labo wiil oo uu dhalay boqorkii hore ee Sacudi Carabiya Boqor Cabdalla kuwaasoo ka mid ahaa amiiro loo xirey musuqmaasuq. Amiir Meshaal bin Abdullah iyo Amiir Feysal bin Abdullah ayaa ka mid ahaa illaa labo boqol oo ka soo jeeda qoyska reer boqor,wasiiro iyo ganacsato iyadoo lagu xirey amar uu soo saaray amiirka...
AKHRISO: M/weynaha DF Soomaaliya oo ku dhawaaqay arrimo xasaasi ah, si adagna ugu jawaabay Mucaaradkiisa.
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu si adag uga hadlay dibu dhacyada hareeyey Qarankan kasoo kabanaya dagaalada iyo dibu dhacyada siyaasadu u geysteen, wuxuuna cadeeyey in ay wax wanaagsan dhaqaajiyeen. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ay bedeleen dhaqankii ahaa is khilaafka Madaxda ugu sareysa ee dawladda, oo ay ku bedeleen in loo wada...
FALANQEYN: Soomaaliya oo gaartay guul muhiim ah & M/weyne Farmaajo oo nasiib u yeeshay
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Max’ed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray la wareegida Hagida/maamulida hawada Soomaaliya oo ay mudo dheer maamuleysay shirkad Ajnabi ah, lagana maamulayey magaalada Nairobi ee dalka Kenya, taas oo ay ku naawilayeen dawladdihii iskaga dambeeyey dalkan. Talaabadan ayaa ah mid loo qaaday dhanka horumarka,...
XOG MUHIIM AH: Shir xasaasi ah oo khilaaf ka dhex abuuray Madaxda DFS oo ka furmaya magaalada Baydhabo & Shariif Xasan oo ciyaaraya.
BAYDHABO(P-TIMES)- Gudoomiyaha baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya Prof, Maxamed Sh Cismaan ayaa dadaal dheer u galay sidii uu u qabsoomi lahaa shir dhexmaraya Guddoonka baarlamaanada Dawlad gobaleedyada iyo Guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo, waxayna taasi cashar siyaasadeed oo xoog badan u tahay kooxda Raysalwasaare Xasan Cali Kheyre...
golden goose sneakers on DAAWO:Diyaarado daabulaya ciidamada oo ka dagay Baydhabo & Jawiga oo kacsan
balenciaga sneakers on TOOS: Musharaxiinta Puntland oo hada loo wada yeedhayo & Saxiixyo kala duwan oo laga qaadayo